Ruushku ha u diyaar Garoobo Gantaalka aan soo Ridayo iyo Xiisada 2-da dal oo Faraha ka baxday | Casuura.com kala soco warar sugan & xoggo rasmi ah
Ruushku ha u diyaar Garoobo Gantaalka aan soo Ridayo iyo Xiisada 2-da dal oo Faraha ka baxday
Apr 12, 2018 - jawaab
Madaxweynaha Maraykanka ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in Ruushka uu u diyaar garoowo sidii ay u difaaci lahayeen gantaalka lagu weerrari doonno Suuriya si loogu falceliyo suntii kiimikada ahayd ee la sheegay in dowladda Suuriya ku weerrartay meel ka mid ah Suuriya isbuuci lasoo dhaafay.
Saraakiil sare oo ka tirsan Ruushka ayaa ku hanjabay in ay diyaar u yihiin in ay u jawaaban haddii Maraykanka ay isku dayaan in ay ku soo ridaan gantaal.
Trump ayaa wacad ku maray in jawaab adag ay ka bixin doonaan wixii dhacay, Wuxuu Assad ku tilmaamay “Xayawaan heysta hubka kiimikada”.
Madaxweyne Bashar al-Assad oo kaalmo militari ka haysta Ruushka ayaa diiday in ay geysteen weerarka kiimikada ah.
Sabtidii dad u dhaqdhaqaaqa mucaaridka Suuriya, kooxaha dad badbaadiya iyo hay’addaha gargaarka ayaa sheegay in magaalada mucaaridka ay heystaan ee Douma oo ku taalla bariga gobolka Quuta in ciidammada dawladda soo weerraray iyagoo isticmaalayo sunta kiimakada ah.
Arbacadii Ha’yadda caafimaadka adduunka ayaa waxay codsatay in loo ogolaado galitaan si ay u soo hubiyaan wararka sheegaya in 70 ruux ay ku dhinteen halkaasi, kuwaas oo ay ka mid yihiin 43 qof oo la arkay ay la luudayaan sunta kiimikada.
Maraykanka iyo xulafadiisa Faransiiska iyo Britain ayaa isku raacay arrintan in ay iska kaashadaan waxaana la filayaa in ay u diyaar garoowayaan.